११ वर्षकै उमेरमा कमलाको कमाल ! – Khabarhouse
११ वर्षकै उमेरमा कमलाको कमाल !
Khabar house | १८ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०४:५८ | Comments
प्यूठान : टेलिभिजनको लाइभ दोहोरी कार्यक्रमबाट उदाएकी धादिङकी कमला घिमिरेलाई अहिले स्टेज कार्यक्रममा प्रस्तुति दिन भ्याइनभ्याइ छ । ११ वर्षकै उमेरमा यति धेरै दर्शकले पछ्याउने कमला नेपालमा सम्भवतः पहिलो कलाकार हुन्। लाइभ दोहोरी गाएर दर्शकलाई चकित पार्न सक्ने क्षमताका कारण उनी वाहवाही भएकी हुन्।
प्रतिभा देखाउने सिलसिलामा उनी बिजुवारमा जारी स्वर्गद्वारी चौथो प्यूठान महोत्सवमा आइ पुगिन् । कमला आउने खबरले प्यूठानका गाउँगाउँबाट दर्शक महोत्सवमा ओइरिए। बिहीबार आधा दर्जन कलाकारको प्रस्तुति भए पनि धेरैजसो दर्शक उनै कमलाको प्रतिभा सुन्न आतुर देखिन्थे। फागुन ८ देखि जारी महोत्सवमा सबैभन्दा धेरै दर्शक कमला आउने दिन नै ओ’इरिए।
‘चिया छानेको, बोलीले हँसाउन कत्ति जानेको’ उनले गाएको गीत सबैजसो दर्शकको मनमा बसेको छ। महोत्सव स्थलमा भेटिने सबैले कमलाले गाएको ‘चिया छानेको’ सुन्न आएको भन्ने भेटिन्थे । यति सानै उमेरमा हजारौं दर्शकका अगाडि नाम चलेका कलाकार सँग लाइभ दोहोरी गाउन सक्ने ‘विलक्षण’ क्षम’ताकी कमला प्यूठानीको मनमा बसिन्। स्टेजमा प्रस्तुति राख्दा उनलाई कै’द नगर्ने कमै हुन्थे।
‘जिन्दगी गर्ने खाने, मर्ने जाने हो, किन लिन्छौ पिरलो’, उनले गाएको यो गीत पनि धेरैले मन पराए। लोकगायक कृष्ण रेउलेसँग कमलाले लाइभ दोहोरी गाइन्, ‘चिया छानेको’ भाकामा। गायक रेउलेसँग पनि कमजोर भइनन्। छिनभरमै फर्काइहाल्नुपर्ने दोहोरीमा उनी मीठामीठा शब्दले टुक्का जुराउँथिन्। टेलिभिजन कार्यक्रममा मात्र होइन; उनी हजारौं, लाखौं दर्शकका माझमा पनि लाइभ दोहोरी गाउन सक्ने भएकी छन्। अन्नपुर्ण पोस्टमा केशर राेकाले लेख्नु भएको छ ।